Paraiso Indlu yeeNdwendwe Bonapriso # Ifanelekile kuMsebenzi wokuHlala!
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguPearl
Lundwendwe oluthandekayo lwekamva (s),
Sijonge phambili ekwamkeleni kwiNdlu yeeNdwendwe yethu!
Ilungele ukuhlala kobuchwephesha, uya kufumana nathi indawo emnandi, enoxolo, ecocekileyo, kwindawo ekhuselekileyo 24/24. Igumbi ngalinye line-air conditioning kwaye lixhotyiswe ngedesika. Kwisiza, ichibi lokuqubha, ijenereyitha, iindawo zokugcina amanzi.
Ifakwe kwimizuzu emi-5 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseDouala, eBonapriso, kufutshane nazo zonke izinto eziluncedo. Beka phantsi iibhegi zakho kwaye sikuhoye!
-Amagumbi amabini okulala abanzi, ngalinye linebhedi ephindwe kabini, iiwodrophu ezinkulu kunye nedesika
-Igumbi lokuphumla labucala, iisofa 6 izihlalo, itafile yokutyela enezihlalo ezi-6, ifriji eyongezelelweyo
-ITV enomjelo +
- Umoya womoya kwigumbi ngalinye eliphambili
-Igumbi lokuhlambela elibanzi + namanzi ashushu
-Ikhitshi eliphangaleleyo kunye nezixhobo
- Intendelezo encinci yangaphandle enetafile yegadi kunye nezitulo, ukonwabela ilanga
- Iilinen kunye nezixhobo zinikezelwe (amashiti, iitawuli)
- Ichibi lokudada elimnandi kakhulu
- Uvimba wamanzi
- Ukugada 24h / 24h; 7/7
Indawo yokuhlala ikwiBonapriso, indawo edumileyo yokuhlala yaseDouala. Isikhululo seenqwelomoya imizuzu emi-5 ngemoto. Zonke izinto eziluncedo kumgama wokuhamba (indawo zokutyela, iivenkile ezinkulu, iimarike ezincinci, iindawo zokuzilolonga, iklabhu yasebusuku, ipub, indawo yokuphumla, ikliniki, isaluni yobuhle, njl ...).
Iindawo zomdla zikufuphi.
Umbuki zindwendwe ngu- Pearl
EParaiso Guest House kuya kuhlala kukho umntu oza kuphendula izicelo zakho. Ungalibazisi ukunxibelelana nathi ukuba kuyimfuneko, kuthi kuluyolo ukuba mnandi kuwe.
Iilwimi: 中文 (简体), English, Français, Italiano, Português, Español